गर्भाशय ग्रीवाको क्यान्सरसँग मैले कसरी गर्भावस्थामा नेविगेट गरें - समुदाय | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य भारी खेल कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी चेकआउट खेलहरु प्रेस समुदाय औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा समाचार, कल्याण कम्पनी, समाचार मनोरञ्जन समुदाय, कल्याण
मुख्य >> समुदाय >> मैले गर्भावस्थामा ग्रीवाको क्यान्सर निदान कसरी नेभिगेट गरें
मैले गर्भावस्थामा ग्रीवाको क्यान्सर निदान कसरी नेभिगेट गरें
समुदाय मातृ मामला
२०१ In मा, मैले आशा लिएको समाचार पाएँ — म बच्चा जन्माउँदै थिएँ! मैले महसुस गरें कि म १ pregnant औं म्याराथन दौड्न अघि गर्भवती हुँ। जब म घर फर्कें, म सिधै मेरो OB-GYN तिर पुगें कि म निश्चित थिएँ, म अपेक्षा गर्दै थिए।
उत्साहित र मेरो नयाँ प्यारेन्टहुड यात्रा शुरू गर्न को लागी तयार, म तुरुन्तै मेरो पछिल्लो नियमित भेटघाटहरू अनुसूचित, सहित एक ग्रीवा क्यान्सर स्क्रीनि forको लागि प्याप टेस्ट । HPV को साथ एक प्याप परीक्षण र को-परीक्षण सिफारिस गरीन्छ पाँच वर्ष उमेर देखि उमेर 65 को उमेर सम्म, प्रत्येक अनुसार अमेरिकी क्यान्सर समाज दिशानिर्देशन ।
नर्सले मलाई केहि दिन पछि बोलाए। मेरो परीक्षण परिणामहरू असामान्य थिए।
एउटा असामान्य प्याप स्मीयरको अर्थ के हो
म थोरै चकित भएँ, तर चिन्तित भएन। जब एक प्याप स्मीयर असामान्य छ, यसको मतलब यो छ कि तपाईको ग्रीवामा कोषहरू ठिक देखिन्छन्। यसको मतलब यो होइन कि तपाईंलाई क्यान्सर छ, यद्यपि यो एक सम्भावना हो। त्यहाँ गर्भाशय ग्रीवाको क्यान्सर स्क्रिनि forका लागि विभिन्न मूल्या steps्कनका विभिन्न प्रकारका हुन्छन्।
मेरो केसमा, असामान्य कोशिकाहरू मानव पेपिलोमा भाईरस (HPV) भनिने एक आम यौन संक्रमणको कारण भएको थियो। पुरुष र महिला दुबै यौन सक्रिय वयस्कहरू मध्ये करीव %०% उनीहरूको जीवनको कुनै न कुनै समयमा एचपीभी संक्रमित हुन्छन्, भन्छन्। क्याथलीन एम। स्मेलर, एमडी , ह्युस्टनको एमडी एन्डरसन क्यान्सर केन्द्रमा gynecologic oncology र प्रजनन चिकित्सा को एक प्रोफेसर।
धेरैको लागि, संक्रमणले कुनै समस्याहरू उत्पन्न गर्दैन। डा। श्मेलरले भनेका अधिकांश व्यक्तिहरू आफैंमा यो संक्रमण खाली गर्दछन् र कहिले पनि यो पनि थाहा हुँदैन कि तिनीहरूलाई यो थियो। महिलाको सानो अनुपातमा, HPV संक्रमण कायम रहन्छ र ग्रीवा डिस्प्लासिया हुन सक्छ, जुन HPV परीक्षण वा प्याप स्मीयरमा लिन सकिन्छ।
किनकि मेरो प्याप स्मीयर देखायो अनियमित ग्रंथि कोशिका यसले क्यान्सरलाई स indicate्केत गर्न सक्छ, मेरो OB-GYN नजिकबाट हेर्न र एक कोलपोस्कोपीको साथ अर्को नमूना प्राप्त गर्न चाहान्थ्यो।
कल्पोस्कोपी भनेको के हो?
एक प्याप स्मीयर जस्तै,aकोलपोस्कोपी एक श्रोणि परीक्षा हो जुन तपाइँको ग्रीवामा नजिकको हेराई प्रदान गर्दछ। एक सिरका आधारित समाधान सामान्य तपाइँको गर्भाशय ग्रीवा मा लागू गरियो कुनै अनियमितता हेर्न सजिलो बनाउनको लागि। र एक कोलपोस्कोप, एक उपकरण जुन दूरबीन जस्तो देखिन्छ, नजिकबाट हेर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। मेरो केसमा, मेरो OB-GYN उसले के देख्यो बारे चिन्तित थियो र अतिरिक्त नमूना प्राप्त गर्न ग्रीवा बायोप्सी गर्ने निर्णय गर्यो। १ 13 हप्ता गर्भवती हुँदा मैले सामान्य भन्दा बढी रक्तस्राव अनुभव गरें, तर यो अवधि भन्दा धेरै गाह्रो थिएन र केही दिन मात्र चलायो।
मेरो बायोप्सी परिणामहरू फेला पार्दै
मेरो बायोप्सी परिणामहरूले देखाए कि मसँग थियो AIS, स्थितिमा एडेनोकार्सिनोमा , वा चरण 1A1 गर्भाशय ग्रीवा क्यान्सर। सन् २०१ the मा गरिएको अध्ययन अनुसार सर्वाइकल क्यान्सर महिलाहरूमा चौथो सबैभन्दा सामान्य क्यान्सर हो विश्व स्वास्थ्य संस्था (WHO), तर संयुक्त राज्यमा यो कम कम प्रचलित छ। अर्को शब्दमा, मेरो अवस्था - HPV र ग्रीवा क्यान्सर - असामान्य थिएन।
मेरो निदानको समयदेखि नै म दोस्रो त्रैमासिकमा भएको हुनाले, मलाई तुरुन्तै स्त्री रोगविज्ञानसम्बन्धी ऑन्कोलॉजिस्ट भनियो जसले मेरो ग्रीवालाई अर्को हेराइ दिन्थे र मलाई उपचार योजनाको साथ प्रस्तुत गर्थे।
जब योजना बी को लागी सबैभन्दा राम्रो समय हो
यो निदान प्राप्त गर्नका लागि मैले सबैभन्दा पहिला अनुभव गरेका एक धेरै तनावपूर्ण फोनहरू मध्ये एक हो। तपाइँ क्यान्सर हुन सक्छ पत्ता लगाउन भयानक छ, तर तपाइँ क्यान्सर हुन सक्छ पत्ता लगाउँदा तपाइँको पहिलो बच्चा बोक्दा अझ खराब छ। भाग्यवस, मसँग एक महान समर्थन प्रणाली र चिकित्सा टोली थियो जसले प्रक्रिया मार्फत मलाई मद्दत गर्‍यो।
गर्भवती हुँदा ग्रीवाको क्यान्सरको उपचार गर्दै
यस अनुसार केल्ली स्निडर, एमडी, उत्तरी क्यारोलिनाको चार्लोटमा नोभन्ट हेल्थमा गाईन्कोलोगिक ऑन्कोलॉजिस्ट, मेरो उपचार योजना प्रारम्भिक चरणको ग्रीवा क्यान्सर भएको गर्भवती बिरामीको लागि विशिष्ट सिफारिससँग अनुरूप थियो। मेरो गर्भाशय ग्रीस निगरानीको लागि प्रत्येक तीन महिनामा मेरो अन्कोलॉजिस्टसँग भेट्ने गर्थें र बच्चा जन्माउन सकिए पछि शंकु बायोप्सी बनाउँथें।
को उपचार फरक हुन्छ गर्भावस्थाको अवस्था र क्यान्सरको प्रगतिमा आधारित। यसले लिम्फैडेनेक्टॉमी (प्रभावित लिम्फ नोड्स हटाउने), ट्रेकेलेक्टोमी (ग्रीवा, योनी, र वरपरको ऊतकों को अंश हटाउने), वा नियोएडजुभन्ट केमोथेरापी (ट्यूमरको आकार घटाउन औषधि) समावेश गर्न सक्दछ। गर्भावस्थामा पत्ता लगाइएका प्रायः केसहरू हल्का हुन्छन्। यस परिदृश्यमा बाँच्ने दर .1 99.१% छ।
मार्च २०२० मा, मैले मेरो छोरा, पारकरलाई दिएको आठ हप्ता पछि म भित्र गएँकन्जाइजेसनप्रक्रिया, जसले सफलतापूर्वक क्यान्सरयुक्त ऊतक हटायो। मेरो छोरा अब ११ महिनाको भयो, र म अझै क्यान्सर- र HPV- मुक्त छु। म प्रत्येक चार महिनामा नियमित भेटहरूको लागि पछाडि जान्छु ताकि यो निश्चित नै रहन्छ।
उपचारका अन्य प्रकारहरू
गर्भाशय ग्रीवाको क्यान्सर र डिस्प्लासियाको उपचारका धेरै प्रकार छन्, जुन स्टेजमा निर्भर गर्दछ, र प्राय जसो केसहरूमा, उर्वरता सुरक्षित गर्न सकिन्छ। डा। श्मेलर भन्छिन्: ग्रीवा डिस्प्लासिया (क्यान्सरपूर्व क्यान्सर) भएका धेरैजसो महिलाहरूलाई हिस्टरेक्टोमीको आवश्यक पर्दैन। उच्च-श्रेणीको ग्रीवा डिस्प्लासिया भएका महिलाहरूलाई उपचारको आवश्यक पर्दछ र एलईपी (लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्जिसन प्रक्रिया) गुज्रन्छ जहाँ असामान्य कोशिकासहित ग्रीवाको सानो अंश हटाइन्छ र यसले गर्भाशयको धेरै भाग र सबै गर्भाशय स्थानमा छोड्दछ।
अधिक उन्नत चरणहरूमा, 1A2-1B2, हिस्टरेक्टोमी वा कट्टरपन्थी ट्रेकिलेक्टोमी (ग्रीवा, माथिल्लो योनी, र प्यारामेट्रियम, वा गर्भाशय ग्रीवा को आसपास को हटाउने) को विचार गर्न सकिन्छ, र डा। Schnieder अनुसार, ठूला ट्यूमर विकिरण उपचार संगै केमोथेरापी उपचार गर्न सकिन्छ।
रोकथाम को महत्त्व
गर्भाशय ग्रीवाको क्यान्सरले हजारौं महिलालाई असर गर्छ, तर यो नियमित स्क्रिनि and र HPV खोप डा। स्निडेर बताउँछिन्, महिलाहरूले यसलाई रोक्न सक्ने उत्तम कुरा खोप लिनु हो। एचपीभी सबैभन्दा सामान्य यौन संक्रमित संक्रमण हो, र प्रायः सबैजनासँग यो हुन्छ वा भएको छ। यसबाट बच्नको लागि उत्तम तरिका छैन खोप लगाई बाहेक। यो खोप9देखि 45 45 वर्ष उमेरका लागि अनुमोदित छ र गर्भावस्थामा प्राप्त गर्न सुरक्षित छ।
अन्य महत्त्वपूर्ण रोकथाम उपायहरूमा नियमित प्राथमिक हेरचाह, नियमित र समयमै ग्रीवा क्यान्सर स्क्रीनि,, लगातार कन्डम प्रयोग, र स्वस्थ बानीहरू जस्तै धूम्रपान, कम वा मध्यम मदिराको प्रयोग, स्वस्थ आहार, नियमित रखरखाव, र एक स्वस्थ तौल प्राप्त गर्न को पालन समावेश छ।
सम्बन्धित: किन तपाईं Gardasil भ्याक्सिन लिन पर्छ - पनी आफ्नो 30s वा 40s मा
कोरोनाभाइरस महामारीले धेरै महिलाहरुलाई आफ्नो स्क्रीनिंग र नियमित भेटघाट गर्न रोक्न पनि नेतृत्व गरेको छ, यद्यपि क्यान्सर निदानमा प्रभाव अझै अज्ञात छ। क्लिनिकहरू र अस्पतालहरूले अहिले नै सावधानी अपनाइरहेका छन्, त्यसैले यदि तपाईंको अन्तिम स्क्रिनि sinceको समय भयो भने, एउटा अपोइन्टमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोस्। थोरै रोकथाम लामो यात्रा गर्न सक्छ।
ग्रीवा क्यान्सर पछि जीवन
मेरो गर्भाशय ग्रीवाको क्यान्सरको साथ गर्भवती हुनुबाट सबैभन्दा ठूलो टेकवे रोकथामको महत्त्व हो। HPV एक STI हो किनभने, यो एक कलंक पकड जारी, एक जुन म आशा गर्छु कि म आफ्नो अनुभव साझा गरेर बिग्रन मद्दत गर्न सक्छु। र, जब मेरो छोरा पर्याप्त पुरानो छ , ऊ पक्कै पनि खोप लगाईनेछ!
के यो एडीएचडी र रक्सीको लागि औषधि जोड्ने सुरक्षित छ?
शल्यक्रिया पछि कब्जियत हुनु सामान्य हो
कति मेलाटोनिन म राती लिन सक्छु
के म eliquis लिँदा रक्सी पिउन सक्छु?
एलिग्रा र एलेग्रा घ मा के फरक छ?
त्यहाँ premarin क्रीम को लागी एक सामान्य छ